८ सय करोडको दरबारमा बस्ने पटौदीका राजकुमार सैफ अलि खानको कती छ सम्पत्ति ? – Khabaarpati
८ सय करोडको दरबारमा बस्ने पटौदीका राजकुमार सैफ अलि खानको कती छ सम्पत्ति ?
November 5, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on ८ सय करोडको दरबारमा बस्ने पटौदीका राजकुमार सैफ अलि खानको कती छ सम्पत्ति ?
बलिउड अभिनेता सैफ अलि खानले केहि दिन अघि उनि र करिनाले फेरि बच्चाको बाबु पनि बन्न लागेको खुलासा गरे । सैफ अलि खान अभिनेता त हुन नै उनि पटौदीका राजकुमार पनि हुन् ।
२०११ मा बाबुको निधन पश्चात सैफ १० औं राजकुमार बनेका हुन् । उनकी आमा सर्मिला टैगोर बलिउडकी कुनै जमानाकी लोकप्रीय नायिका हुन् ।उनको सम्पत्तिको कुरा गर्दा हरियाणामा रहेको दरबार पटौदीको मुल्य करिब ८ सय करोड छ । राजस्थानको नीमरमणमा पनि उनकै हो ।
सैफको फिल्म केरियरको साथमा उनको सम्पत्तिको पनि चर्चा हुन्छ । अभिनेता सैफ अली खानको करोडौं मुल्यको आलिसान पटौदी प्यालेसको बारेमा जो कोहीलाइ जानकारी छन् । उनी अन्य कलाकारको भन्दा धेरै सम्पत्तिका मालिक हुन् । उनको धेरै पुख्यौली सम्पत्ति नै हो । उनको सम्पत्तिको कुरा गर्दा हरियाणामा रहेको दरबार पटौदीको मुल्य करिब ८ सय करोड छ ।
राजस्थानको नीमरमणमा पनि उनकै हो । निमराको फोर्ट भाडामा लिएपछि सैफले फेरी किनेका थिए । त्यस्तै मुम्बईमा धेरै फ्ल्याटहरु छन् जसमध्ये एउटा ४.२ करोड रुपैयाँ र अन्य २ बंगलाको ६ करोड रुपैयाँ मुल्य रहेको बताइन्छ । त्यस्तै उनको स्विजरल्याण्डमा पनि घर छ ।
अभिनेताको करिब १०० करोड अन्यत्र लगानी छ । २०१९ को सुची अनुसार फोब्सले १०० कलाकारको सुचीमा सैफलाई ७४ औं नम्बरमा
उनीसँग कारहरु ३.४ करोडको अडी आर ८0, ९० लाखको फोर्य मस्तांग, १.४४ करोडको बीएमडब्लु ७ सिरीज, १.५६ करोडको ल्यान्ड रावर स्पोर्ट लगायत छ । यसबाहेक अभिनेताको करिब १०० करोड अन्यत्र लगानी छ । २०१९ को सुची अनुसार फोब्सले १०० कलाकारको सुचीमा सैफलाई ७४ औं नम्बरमा राखेको छ । सैफ महल बाहेक २८५ करोडका मालिक हुन् ।
सैफ फुर्सदको समयमा परिवारसँग यो प्यालेसमा बस्ने गर्दछन् । उनको पिताको निध न भएपछि यो प्यालेसलाई भाडामा दिइएको थियो । पछि सैफले पैसा तिरेर पटौदी प्यालेस आफ्नो नाम गरेका थिए । उनले फिल्ममा काम गरेर आठ सय करोडको यो प्यालेस फिर्ता लिएका थिए ।
१० एकडमा फैलिएको यो प्यालेसमा सात ड्रेसिङ रूम, सात बेडरूम, सात बिलियर्ड रूम, डाइनिङ रूम र ड्रइङ रूमसहित १ सय ५० वटा कोठा
सैफले भनेका छन्, ‘जब पिताको नि धन भयो तब पटौदी प्यालेस, नीमराना होटललाई भाडामा दिइएको थियो । अमन र फ्रान्सिस होटल चलाउँथे । फ्रान्सिसको नि धन भएपछि मैले पटौदी प्यालेस फिर्ता लिएँ ।’ उनले फिल्ममा कमाएको पैसाले यो प्यालेस फिर्ता लिएको बताएका छन् । हालै यही प्यालेसमा सैफ र करीनाले विवाहको ८औं वर्षगाँठ सेलिब्रेट गरेका थिए ।
सैफको पटौदी प्यालेस हरियाणाको गुरुग्राममा अवस्थित छ । यसलाई दुनियाँको सबैभन्दा सुन्दर महलमध्ये एक मानिन्छ । १० एकडमा फैलिएको यो प्यालेसमा सात ड्रेसिङ रूम, सात बेडरूम, सात बिलियर्ड रूम, डाइनिङ रूम र ड्रइङ रूमसहित १ सय ५० वटा कोठा छन् । यो प्यालेसमा ‘मंगल पान्डे, वीर जारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन’ लगायतका फिल्म समेत छायांकन भएको छ ।
प्रियंकाको अर्को उटपट्याङ, यस्तो फोटो सेयर गर्दै भनिन्- कसले राम्रोसँग देखायो ?